Google yakabuda kuzoruramisa zvirambidzo zveManifest V3 uye kuti hazvizokanganisa vanopokana nevanovhara | Linux Vakapindwa muropa
Pave nemwedzi mipfumbamwe kubvira Google yazivisa shanduko huru kuManifest V9, gwaro iro kambani rinopa ruzivo nezve kugona kwemawedzero e browser yako.
Shanduro yechitatu iri mukuita kwekubata uye nharo pamusoro pazvo hadzina kuzorora. Saka nguva pfupi mushure mevashandisi vakatsamwa vakaramba vachityisidzira kusiya browser, mainjiniya eGoogle vakangovimbisa kuti ramangwana shanduko kuchirongwa chekuwedzera cheChannel hachizoremadze vashambadzi semunhu wese anotya
Iyo kambani inoti shanduko kuburikidza neiyo API nyowani ichavandudza mushandisi wega uye nekukasira kugadzirisa.
Uyewo, Google yakavimbisa kuwedzera muganho wepamusoro wehuwandu hwemafuta, izvi, kupedza kumagumo kutsoropodza kwakapihwa nevashambadzi blocker vanogadzira mumwedzi ichangopfuura.
Google yakaburitsa pachena kuti yanga ichiona shanduko idzi kubva Gumiguru gore rapfuura. Pakati pehondo yekurwisana nekuwedzera kwekuwedzera kwakaipa papuratifomu yayo, yazivisa kupinda kwemitemo mitsva mukuwedzeredza kwekutarisa maitiro, asi zvakare shanduko mune yekodhi kodhi yakatorwa muExpensions.
Nepo pakanga paine hurukuro diki pakutanga nezve shanduko iri kuuya kuManifest V3, muna Ndira vavandudzi veakasiyana-siyana ekushambadzira vakasimudza nyaya newebhu API.
Iko kutya kunoratidzwa nevanogadzira: iyo API nyowani inogona kudzivirira ako ekuwedzera kubva pakuongorora mapeji ewebhu zvakaringana.
Yekutanga webhu yekukumbira API inokanganisa kurodha peji iwe uchitsvaga zvirimo zvemashambadziro kana zvimwe zvirimo izvo kuwedzeredzwa kunogona kuvharira kana kugadzirisa.
Pakusunungurwa kwazvino, Google yakaratidza kuti iyi yekare API yaive sosi yekushungurudzwa iyo yaishandiswa nevagadziri vane huipi. Mune manhamba akaburitswa neGoogle, 42% yekuwedzera kwakashata kwakawanikwa kubva munaNdira gore rapfuura yaive yakavakirwa pawebhu yekukumbira API.
"Nechikumbiro chewebhu, Chrome inotumira rese data kubva kunetwork kukumbira kune wedzera vateereri, kusanganisira iyo yakaoma data kubva kuchikumbiro icho, senge mafoto ako pachako kana maemail," anodaro Google
1 Iyo yekuzivisaNetRequest API inoshanda neimwe nzira
2 Iyo Opera, Yakashinga uye Vivaldi inogona kusachinja
Iyo yekuzivisaNetRequest API inoshanda neimwe nzira
Panzvimbo pekuwedzera zvichibva pane zvekupedzisira, kumisa zvikumbiro zvewebhu uye kuongorora zvese zvirimo, iyo yekupedzisira inogadza mitemo inoverengwa nebrowser uye inoshanda kune yega yega peji rewebhu usati warodha.
Neiyi API nyowani, kuwedzeredzwa hakugamuchire data kubva peji uye bhurawuza rinongoita shanduko kune peji kana imwe kana yakawanda yakaziviswa mitemo inoremekedzwa. Nenzira iyi, rese rakavanzika dhata iro rinogona kuverengerwa mune peji (maemail, mapikicha, mapassword, nezvimwewo) rinoramba riri padanho rebrowser uye haritombopfuudzwa kune zvinowedzera. Zvinoenderana neGoogle, iyo API nyowani iri nani maererano nekuvanzika, asi zvakare kumhanya.
Muna Ndira wegore razvino, Ad blockers vakapokana kuti kunyangwe mabhenefiti akaunzwa kuburikidza neAPI nyowani, Google yakaronga kudzikisira mafirita kusvika makumi matatu ezviuru, nhamba inofungidzirwa kuti haina kukwana nevanochengetedza shambadzo.
MunaNdira, Raymond Hill uBlock Chibviro uye kuMatrix kuwedzeredzwa vaive vanyori (pakati pevamwe) veyakakurumbira Easylist block runyorwa nemakumi mana nemazana mana mafirita. Google yakaongorora iyi ruzivo uye inozivisa kupfuudzwa kwemuganhu wefirita kubva pa30,000 kusvika pa150,000.
Iyo Opera, Yakashinga uye Vivaldi inogona kusachinja
Kazhinji, maChromium-based browser vanogadzira vazivisa kuti havazowirirana neshanduko dzinogona kukuvadza vashandisi.
Pamusoro pevashambadziri vanobatanidza mabhurawuza avo, maitiro muOpera neBrave ndeyekuenderera mberi nerutsigiro rweWebhu Rekukumbira API, iyo inobvumidza kuwedzerwa kwakadai saBlock neMatrix kuenderera mberi vachishanda pasina matambudziko.
Ndichiri kuVivaldi, maratidziro anoitwa API anoenderana nesarudzo dzekupedzisira dzeGoogle.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google yakabuda kuzoruramisa zvirambidzo zveManifest V3 uye kuti hazvizokanganisa vanopokana nevashambadzi
Julian Assange chikumbiro chekudzosera kuUnited States chakasaina